ဂျဟ်လ်(အသိဥာဏ်ပညာမဲ့မှု) အားတော်လှန်ခြင်း။အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
News Code : 729920
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ တော်လှန်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များမှအခြားတစ်ခု အား ဇေယာရတ်(သ)အရ်ပအီး(န) မှညွှန်ပြနေပါသည်။
ညွှန်ပြနေသည့်အချက်မှာ ဂျဟ်လ်(အသိဥာဏ်ပညာမဲ့မှု)အား တော်လှန်ခြင်း နှင် လူထုအားလမ်းလွဲ၊လမ်းမှား၊အမှောင်ထုမှ ကယ်တင်ရန်ဖြစ်ပေသည်။
ဤဇေယာရတ်တော်တွင် ဟဇရတ်(သ)အဘီအဗ်ဒွလ္လာဟ်(အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)အား စလာမ်နှင့်သရူးဒ် ဆက်သခြင်းဖြင့် စတင်ပြီး ကိုယ်တော်၏ ဝိသေသနလက္ခဏာရပ်များ ဂုဏ်ပုဒ်များကို တင်ပြထားပါသည်။ပြီးနောက် ကိုယ် တော်၏ တော်လှန်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရှင်းပြ ထားပါသည်။မိန့်တော်မူသည်။
وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ
သခင်ကြီးအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နှလုံးသား၏သွေးအား အရှင်ရဲ့ လမ်းတော်တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပေသည်။(အလွန်တရာစတေးမှုနှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုကို ပြု တော်မူခဲ့ပေသည်။)အကြောင်းမှာ အရှင်၏ကျေးကျွန်၊အဖန်ဆင်းခံများကို ဂျဟ်လ် (အသိဥာဏ်ပညာမဲ့မှု)နှင့် မသိနားမလည်မှု၊အံ့ဩဖွယ်၊လမ်းလွဲ၊လမ်းမှားမှ ကယ်တင် နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အာရှုရာတော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုမှာ ဂျဟ်လ်နာဒါနီ(မသိနားမလည်မှု)အားတော်လှန်ခြင်းနှင့် လူထုအားလမ်းလွဲ၊လမ်းမှား၊ အမှောင်ထုမှ ကယ်တင်ရန် အတွက်ဖြစ်ပေသည်။
ဗနီအိုမိုင်ယာအုပ်ချုပ်သည့် လက်ထက်တွင် ဂျဟ်လ်၏ကျယ်ပြန့်၊ပြန့်နှံ့မှုကို မ တင်ပြမည် ဂျေဟာလသ်၏ အမျိုးအစားများကို ရှင်းပြဖို့ အရေးကြီးပေသည်။ဂျေဟာ လသ်၊နဒါနီ(အသိဥာဏ်၊ပညာမဲ့မှု၊မသိနားမလည်မှု)သည် တခါတရံ အကြောင်းအ ရာနှင့် ပတ်သက်နေပြီး တစ်ခါတလေ ရှရီအီအမိန့်နှင့် ပတ်သက်နေပါသည်။တစ်ခါ တလေ ရှရီအီအမိန့်နှင့် ပတ်သက်နေသည့် ဂျေဟာလသ်သည် တစ်ခါတရံ ကူစူရ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကိုသိဖို့ပြုရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတလေ ဂျေဟာလသ်သက်စီးရ်(အဟ်ကမ်ကိုဆည်းပူးနိုင်လျက် ပေါ့လျော့ပြီး မဆည်းပူးသည့်အခြေအနေ)ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ဂျဟ်လ်(အသိဥာဏ်ပညာမဲ့မှု)ဆိုသည်မှာ သာဓကအားဖြင့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး လူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် ဟရမ်ဖြစ်သည့် အရက်သေစာ အားသောက်လျှင်ဟရမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်၏။သို့သော် သောက်စရာတစ်ခုခု အား ဟလာဖြစ်သည့် ဖျော်ရည်ဟုထင်မှတ်ပြီး သောက်သုံးခဲ့မည်။ပြီးမှသိရှိနားလည် ပေမည်။ဖျော်ရည်မဟုတ်ပဲ၊အရက်သေစာ ဖြစ်နေလေသည်။
ဂျဟ်လ်ဟွန်က်မေရှရီအီ(ရှရီအီအမိန့်ဥပဒေ)ဆိုသည်မှာ သာဓကအားဖြင့် ဤ သောက်စရာသည် အရက်သေစာဆိုတာသိသော်လည်း ရှရီအီအမိန့်ကို မသိခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်။အရွယ်ရောက်ပြီးသာသနာ့အမိန့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် သူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်အတွက် အထက်ပါသာဓကနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး တင်ပြရမည်ဆို လျှင် အမိန့်ကိုနားလည်ရန်အတွက်နှင့် သုတေသီပြုရန်အတွက် အခြေအနေများရှိ လျက် သုတေသီမပြုပဲနေသူဖြစ်ပေသည်။ဤအခြေအနေတွင် သက်စီးရ်ပြုလုပ်ခဲ့၍ ၎င်းအားဂျဟ်လ်သက်စီးရ်ဟုခေါ်ဆိုပေမည်။တစ်ခါတစ်ရံ အမိန့်ကိုနားလည်ရန်အ တွက်နှင့် သုတေသီပြုရန် အလို့ငှာ အခြေအနေများ မရှိချေ။သို့မဟုတ် မှားယွင်း မည်။လမ်းလွဲနေသည်ဟု လုံးဝမထင်ခဲ့ချေ။ဤအခြေအနေတွင် ၎င်းအားဂျဟ်လ်ကာ စေရ် ဟုခေါ်ဆိုပေမည်။
မွတ်စလင်များသည် ခြုံငုံပြီးပြောရလျှင် ဗနီအိုမိုင်ယာလက်ထက်တွင် အထူး သဖြင့် မိုအာဝေယာနှင့် ယဇီးဒ်(လ.န)အုပ်ချုပ်သည့်ကာလတွင် ရန်သူအားမသိကြ ချေ။၎င်းတို့အနေဖြင့် ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ရစူလွလ္လာဟ်(ဆွ)၏ကိုယ်စားလှယ်တော် အစစ်အမှန်များ မဟုတ်ကြောင်း မသိကြချေ။ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ကိုယ်ချင်းစာသူ၊ အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား အားပေးထောက်ခံသူ မဟုတ်ပါ။၎င်းတို့၏ ဂျဟ်လ် သည် သက်စီးရ်ကြောင့် ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ဤအတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ သည်ဂျဟ်လ်မိုကက်စေရ် စာရင်းဝင်သွားလေသည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ဂျာဟေလီယသ်ခေတ်က အကြွင်း၊ အကျန်များဖြစ်ကြောင်း၊အစ္စလာမ်သာသနာ့တော်နှင့် ကာလရှည် ရန်ငြိုး၊ရန်စရှိ ကြောင်း၊ယခုတိုင် ဗဒဲရ်စစ်ပွဲ၊အိုဟွဒ်စစ်ပွဲ၊အဟ်ဇာဗ်စစ်ပွဲများတွင် မိမိတို့၏ဆွေမျိုး ရင်းချာများ အသတ်ခံခဲ့ရသည့်၊ခါးသီးသည့်၊အဖြစ်အပျက်အား မမေ့သေးဘဲ (အစ္စလာမ်ဆီမှ)သွေးကြေးပြန်ဆပ်ဖို့၊အခွင့်အလမ်းစောင့်လှမ်းနေကြောင်း မသိပါသ လော?
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့် ထိုအတွက်ကြောင့် ဤကဲ့သို့သော် နေ့များနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ရှေ့ပြေးအဖြစ် မိန့်တော်မူခဲ့ပြီး၊ခေလာဖသ်အား အာလေ အဗူစိုဖီယန်အပေါ် ဟရမ်ပြုတော်မူခဲ့လေသည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အရေအတွက်များစွာသော ရီဝါယတ်တော် များ၊ထို့ပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့်မရ်ဝန်ဗင်ဟေကမ်တို့၏ အပြန်အလှန် စကားပြောမှုများတွင် ပေါ်လွင်ခဲ့ပေသည်။ထိုညကို အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ဒါရွလ်အေမာရေဟ် မဒီနာ(မဒီနာရှိအစိုးရရုံးချုပ်)ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး၊မိုအာဝေယာ၏ ဇီဝိန် ချုပ်သည့် သတင်းပေးခဲ့လေသည်။ပြီးနောက်ယဇီးဒ်ထံ ဗိုင်အတ်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ လေသည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)အနေဖြင့် သဘောမတူခဲ့တော်မူပေ။ပြီးနောက်၊နောက် တစ်နေ့တွင် မရ်ဝန်အနေဖြင့် အေမာမ်(အ.စ)အား လမ်းကြားတစ်ခုတွင်တွေ့ခဲ့လေ သည်။
ကိုယ်တော်အားတိုက်ရိုက်ပြောလေသည်။အိုအဗာအဗ်ဒွလ္လာဟ်(အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင်းအတွက်ကောင်းတာပဲလိုပါတယ်။မင်းအတွက်အကြံပေးဖို့ ရှိပါတယ်….အကယ်၍လက်ခံခဲ့မည်ဆိုရင် မင်းအတွက်ကောင်းပြီးသင့်တော်ပါမယ်။ အေမာမ်(အ.စ)သည်အဖြေပေးမိန့်လေ၏။အသင်၏အကြံဘာလဲပြောပါ? အဖြေပြန် ပြောလေ၏။မနေ့ညက ဝလီးဒ်ဗင်အွသ်ဗာထိုင်ပြီး၊စကားပြောထားသည့်အတိုင်း ခင်ဗျားအနေဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)နှင့် ဗိုင်အတ်ပြုပါလေ။ဤအလုပ်ဟာ မင်းအတွက် လောကီ၊လောကုတ္တရာအကျိုးရှိမည့် အလုပ်ပါ။
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَى الاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله ) صلى الله عليه وآله ( يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى آلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذا رَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوا بَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُ اَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوا فَابْتَلاهُمُ اللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အတွက် ဖြစ်တော်မူပေ သည်။အရှင်ထံသို့ ပြန်လှည့်ကြရပေမည်။ယဇီးဒ်ဗင်မိုအာဝေယာကဲ့သို့သော် လူမျိုး မွတ်စလင်များ၏ အာဏာပိုင်၊အစိုးရမင်း ဖြစ်သည့်အချိန်ကာလတိုင်း အစ္စလာမ်သာ သနာ့တော်အတွက် မဖြစ်မနေ ဖာတေဟာဖတ်ပါလေ။သံသယမရှိ၊ကျွန်တော်၏ဘိုး တော်ရစူလ်လေခိုဒါ(ဆွ)ထံမှကြားနာခဲ့ရပါသည်။မိန့်တော်မူသည်မှာ-ခေလာဖသ် (အုပ်ချုပ်မှုအချုပ်အချာအာဏာ)ဟာ အာလေအဗူဆိုဖီယန်အတွက် ဟရမ်ဖြစ်ပါ သည်။အကယ်၍ အသင်တို့အနေဖြင့် မိုအာဝေယာကို ငါ၏မင်ဗဲရ်အပေါ်တွင်တစ်နေ့ နေ့တွေ့ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ဝမ်းဗိုက်ကိုခွဲလိုက်ပါ၊(သတ်ပါလေ။)
မဒီနာမြို့သူ၊မြို့သားများအနေဖြင့် မိုအာဝေယာကို မင်ဗဲရ်ရစူလ်(ဆွ)တွင် တွေ့ခဲ့သော်လည်း မသတ်ခဲ့ကြချေ။(တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အမိန့်ကို မနာခံခဲ့ကြ ချေ။)ဤအတွက်ရလာဒ်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ယဇီးဒ်(လ.န)လို ရာဇဝင်၊ဒုစရိုက်သမား၊လက်အောက်သို့ ပို့ခဲ့လေသည်။
မရ်ဝန်အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ အထောက်အထား၊သက်သေ ခိုင်လုံ၊တိကျသည့် မိန့်ဆိုမှုကို ကြားပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ ထွက်သွားလေ၏။
အေဗ်နေအဘီအလ်ဟဒီးဒ်ရေးသားသီကုံးထားပါသည်။မိုအာဝေယာအနေဖြင့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိခဲ့ပေသည်။နေ့စဉ်၊နေ့တိုင်း ၎င်းထံသွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်။ထို မိတ်ဆွေသည် မိုအာဝေယာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသူများနှင့် လျှို့ ဝှက်ချက်များကို သိမ်းထားသည့်(စိတ်ချရသည့်)သာဝကများမှ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ထိုမိတ်ဆွေအနေဖြင့် ပြောဆို၏။(အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသဗာ (အ.စ)တို့ ရှဟီးဒ်ဘွဲ့များခံယူတော်မူပြီးနောက် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့လေသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် မိုအာဝေယာကို ပြောလေ၏။မိုအာဝေ ယာ! မင်းအနေနဲ့ လိုချင်တဲ့အရာကို ရပြီပဲ၊အခုမင်း အစ္စလာမ်မြို့များအားလုံး၏ အစိုး ရမင်းအာဏာရှင်ဖြစ်နေပြီပဲ၊ဗနီဟာရှင်အပေါ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း၊သတ်ဖြတ်မှုကို လျော့ပါလေ။ထပ်ပြီး မင်ဗဲရ်များအပေါ်မှ အလီ(အ.စ)ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာမှု၊လအ် နတ်ပို့မှုကို မလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးပါလေ။မိုအာဝေယာအဖြေပေး၏။မင်းလုပ်တာမှားနေ တယ်နော်!ငါအနေဖြင့် ပေးသည့်နေရာများမှ မွတ်စလင်များအနေဖြင့် တမန် တော်(ဆွ)၏ အမည်ကို မထည့်သည့်အထိဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်တာ။မှန်တယ်။(ဒါ ကြောင့်)အဇါန်ပေးသည့်နေရာများမှ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏အမည်ထည့်နေသမျှ ကာလပတ် လုံး ငါစိတ်ချမ်းသာစွာ နေနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။(دفناً دفناً)
ကြည့်-ရှရ်ဟ်နဟ်ဂျိုဗလာဂါ အေဗ်နေအဘီအလ်ဟဒီးဒ်ကျမ်းအတွဲ(၅)၊စာမျက်နှာ (၁၃၀)၊သရ်ဂျိုမာဝါရှရ်ဟ်နဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်းအတွဲ(၁)၊စာမျက်နှာ(၃၇၆)။
ဗနီအိုမိုင်ယာ၏ ရန်ငြိုး၊ရန်စ၊အထူးသဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏ ရန်ငြိုး၊ရန်စ၊ အစ္စလာမ်အပေါ်ထားမှု၊ဤကဲ့သို့(ဗနီအိုမိုင်ယာ)၏ ရန်ငြိုး၊ရန်စ၊ထားမှု အမြစ်တွယ်၊ မကောင်းမှု၊အခြေခံ(မကောင်းမှု)တို့နှင့်အစ္စလာမ်အတူပေါင်းစပ်၍ မရချေ။သို့သော် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ….ဘာသာအား ထိုခေတ်၊ထိုအခါကကြီးမားသည့် အရေအ တွက်များသည်မွတ်စလင်လူထုကြီးအနေဖြင့်မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားသည့်ဘီလူးများဖြစ်သည့်)ဗနီအိုမိုင်ယာကို မသိရှိနားမလည်ခဲ့ကြချေ။
ယဇီးဒ်(လ.န)သည် အရက်သေစာ၊သောက်စားမှု၊လူသတ်မှု၊စိတ်အလိုလိုက်မှု ၊မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်ပြုမှုတို့တွင် ကျော်ကြားပေသည်။(ဤလူယုတ်မာ)သည်မဒီနာရွှေ မြို့တော်အား တိုက်ခိုက်ခဲ့လေသည်။မြောက်များစွာသော ဤမြို့နေသူ၊မြို့သားများ အား သတ်ဖြတ်ခဲ့လေသည်။မိမိ၏စစ်သား၊စစ်သည်များကို(၃)ရက်တိုင်တိုင် ဤမြို့ (မဒီနာမြို့)တွင် လုပ်ချင်တာလုပ်လိုရရန် ခွင့်ပြုခဲ့လေသည်။ယဇီးဒ်(လ.န)၏ စစ်တပ် သည် သတ်ဖြတ်မှု၊လုယက်မှုကို ပြုခဲ့ကြလေသည်။အခြားပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်ရာဇဝင်များ ကို ကျူးလွန်ခဲ့လေသည်။တင်ပြရေးသားရန် ကလောင်ပင်ရှက်ပေလေသည်။
အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ဇိုဗိုင်ရ်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အိမ်တော်ကအ်ဗာ ဝတ်ကျောင်းတော်တွင် ခိုလုံနေစဉ် ယဇီးဒ်(လ.န)သည် အေဗ်နေဇိုဗိုင်ရ်အားမသနား မကြင်နာခဲ့ချေ။ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်အားလည်း မရိုသေ၊မလေးစားခဲ့ပေ။ထို့ပြင် မက္ကာရွှေမြို့တော်သူ၊မြို့သားများကိုလည်း အားမနာ၊မျက်နှာမထောက်ခဲ့ချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် မက္ကာရွှေမြို့တော်၏ အနီးတဝိုက်တွင် မင်ဂျနီးက်(ခ)လေး ဂွအကြီးစားများကို တပ်ဆင်ပြီး၊ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်အပေါ် ခဲမိုးများကို ရွာရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့လေသည်။
အမှန်တကယ် အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ အဟ်ကမ်(ဥပဒေများ)အရ မည် သူမဆို အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အိမ်တော် ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်တွင် ခိုလုံ မည်ဆိုလျှင် ၎င်းအတွက် လုံခြုံမှု၊ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို ပေးရမည်ဖြစ်ပေသည်။ယုတ်စွအ ဆုံး ရာဇဝတ်သားများဖြစ်နေပါစေ(လုံခြုံမှုကိုပေးရမည်။)ရာဇဝတ်သားများအား ဟရမ်အမ်(န)နေအေလာဟီ(ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်)မှ မတတ်နိုင်သည့်အဆုံး ထွက်သွားသည်အထိ၊အစာရေစာ၊ငတ်မွတ်သည့်အထိ အစာရေစာမပေးဘဲ ထား နိုင်ပေသည်။ထို့နောက် ၎င်းတို့၏ ပြစ်မှု၊ကျူးလွန်မှုခိုင်လုံမှသာထောင်ဒဏ်၊အပြစ် ဒဏ်ပေးရပေမည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုအား နိုးကြားမှု၊သိရှိနား လည်မှု၊ရှိလာရန် အလို့ငှာ တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ပေသည်။သို့သော် ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ၎င်းတို့အိပ်စက်မှုသည် အလွန်တရာအအိပ်ကြီးပြီး၊၎င်းတို့၏ မသိနားမ လည်မှုမှာ အခြေတွယ်၊အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏ သစ္စာရှင်သာဝကတော်များသည် နှလုံးသွေးပေးဆပ်ခဲ့ ရလေသည်။ ဤပေးဆပ်မှုသာလျှင် အရေးကြီးသည့် ပြဿနာ၊ဘေးဆိုးအား အစ္စလာမ်တည်းဟူ သည့် လယ်ယာမြေမှ ကာကွယ်ပေးခဲ့လေသည်။
ပြည်သူလူထု(မွတ်စလင်များ)အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့်သာဝက တော်များ၏ ရှဟီးဒ်ဖြစ်တော်မူပြီးနောက် အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)၏ မိသားစုဝင်များ အဖမ်း၊အဆီး၊အချုပ်အနှောင်ခံရပြီးနောက်၊ရှိုဟဒါယေကရ်ဗလာ(ကရ်ဗလာတွင် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သည့် အေမာမ်(အ.စ)အပေါင်းအပါ၊အမျိုးအနွယ်များ)၏ ဦးခေါင်းတော် များ လှံထိပ်ဖျားသို့ မြှင့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ မေ့လျော့မှုဆိုသည့် အိမ်မက်မှ နိုးထ လာကြပေသည်။ထို့နောက် တော်လှန်ရေး၊စစ်ပွဲများတစ်ခုပြီး၊တစ်ခုဆင်နွဲခဲ့ ကြလေ သည်။ကရ်ဗလာအဖြစ်အပျက် ပြီးနောက် ဗနီအိုမိုင်ယာ အခြေအနေသည်မလှတော့ ချေ။နောက်ဆုံး ဤသန့်ပြန့်၊သန့်ရှင်းသည့်(အပြစ်မဲ့)သွေးများကြောင့် ဗနီအိုမိုင်ယာ အား အချုပ်၊အချာအာဏာမှ ပြုတ်ရပြီး၊မသန့်ပြန့်၊မသန့်ရှင်းသည့် သစ်ပင်တည်းဟူ သော ဗနီအိုမိုင်ယာ အမြစ်လှန်ခဲ့ရလေတော့သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား အချစ်ထားသူများ၊သခင်ကြီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီ ကိုပြုလုပ်ကြသူများ၊ကရ်ဗလာမိုအလ်လာ၏ ဇေယာရတ်အရ်ပအီး(န) ဖတ်ရွတ်သူ များရှိုဟဒါယေကရ်ဗလာနှင့် သဝ်စိုလ်ပြုလုပ်သူများအတွက် အရေးကြီးလိုအပ်သည့် အချက်မှာ သဝ်စိုလ်၊ဇေယာရတ်၊အဇာဒါရီနှင့်တကွ သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူး များကို အချစ်မေတ္တာထားရင် တဖက်တလမ်းမှ မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်း၊အ ဝိုင်းကို မေ့လျော့နေသည့် အိမ်မက်မှထနိုင်ရန် မသိနားမလည်သည်ကို သိနားလည် အောင်ကြိုးပမ်း ပေးရပါမည်။
ယခုလက်ရှိခေတ်ကာလတွင်လည်းပဲ ယဇီးဒ်(လ.န)ကို ထောက်ခံအားပေးသူ များ၊ဗနီအိုမိုင်ယာအစိုးရ၏ နောက်လိုက်၊နောက်သားများ တကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန့်နှံ့နေ ပါသည်။အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင် ပိုမိုပြီးရှိနေပေသည်။မွတ်စလင်လူထု အား အသိဥာဏ်ပညာမဲ့မှု လမ်းစဉ်တွင်ထိန်းထားနိုင်ရန် ကြိုးစားနေပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် မွတ်စလင်များ(အားလုံး)ကို ဤအန္တရာယ်ဆိုးနှင့်ပတ် သက်ပြီးနိုးဆော်တိုက်တွန်းရန် ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် သမိုင်းပေးတာဝန်ရှိ ပေသည်။
ထိုအုပ်စုသည် အမြင်အားဖြင့် အစ္စလာမ်အာဏာပိုင်များအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြပြီး မွတ်စလင်များ၏ နံပါတ်တစ်ရန်သူများဖြစ်သည့် အမေရိကန်၊ အစ္စရေးတို့နှင့် သစ္စာဆိုထားကြပြီး၊အနှိပ်စက်၊အညှဉ်းပန်း၊အရက်စက်ခံနေကြရ သည့် ပါလက်စတိုင်း၊ဂါဇာ၊အီရတ်နှင့် အာဖဂန်နီစတန်ရှိ မွတ်စလင်များ၏ ဆန့်ကျင် ဘက် ခြေများလှမ်းနေကြပေသည်။၎င်းလူမျိုးစုများ၏ နိုးကြားလာမှုတော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်လာမှု၊ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း(ဤအုပ်စုသည်မိမိတို့၏)ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်၊ညှဉ်းပန်းမှုများ၊လူမဆန်မှုများကို ဆက်လက်ပြုနိုင်မည် စွမ်းအားရှိဦးမည် လော?